> Resource > Transfer > 2 Methods si ay u gudbiyaan Xogta laga Nexus 4 ilaa Nexus 5
Hel cusub Google Nexus 5 oo doonaya in ay u gudbiyaan xiriirada, fariimaha qoraalka ah, sawiro, videos, files audio iyo ka badan oo ka Nexus jir 4 aad Nexus 5? Maqaalkani waxa aad telll doonaa sida loo isticmaalo taleefanka si kala iibsiga phone - Wondershare MobileTrans in aad nuqulka content ka Nexus 4 ilaa Nexus 5. Waxaad dooran kartaa sida ay adiga kugu habboon.
Qeybta 1: Switch ka Nexus 4 ilaa Nexus 5 1 click
Qeybta 2: Soo Celinta Nexus 5 ka Nexus 4 gurmad
Qeybta 1: Xogta laga Nexus 4 Bedelka in Nexus 5 1 click
Si aad xog ka Nexus 4 wareejiyo Nexus 5 si deg deg ah, si xoog leh ayaan kuu soo jeedinaynaa inaad isku daydo feature "Phone in Transfer Phone" ee Wondershare MobileTrans. Waa awoodaan si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda, SMS, xiriirada, jadwalka, music, videos, sawiro iyo wac Guda ka Nexus 4 ilaa Nexus 5 ka mid click. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud loo isticmaalo.
Tallaabada 1. Connect Nexus 4 & Nexus 5 ilaa kombiyuutarka
Download iyo rakibi Wondershare MobileTrans on your computer. Connect labada Google Nexus telefoonada: Nexus 4 iyo 5 Nexus, in kombiyuutarka via fiilooyinka USB. Burcad MobileTrans. Software Tani waxay ogaan doonaan labada telefoonada Google Nexus goobtii.
MobileTrans Ku jira qaababka badan. Halkan waxaad isku daydaa inaad ka "Phone in Transfer Phone" feature. Markaas waxaad ka arki kartaa in Nexus 4 iyo Nexus 5 waxaa lagu soo bandhigaa dhinac.
Tallaabada 3. xogta ka dhaqaaq Nexus 4 ilaa Nexus 5
Sida shaashada kor ku sheegayaa, dhammaan macluumaadka ayaa la hubinayaa. Sidaas darteed, haddii aad waxaa jira qaar ka mid ah macluumaadka aadan rabin inaad guurto, waa uncheck. Markaas, bilowdo Nexus 4 in Nexus 5 iibsiga adigoo gujinaya Start Copy . In bar pop-up horumarka, waxaad ka fiirin kartaa horumarka wareejinta xogta. Marka lagu sameeyey, riix OK .
Marka loo eego Habka 1aad, habka soo socda 2aad sidaas ma aha, si toos ah. Halkan, marka hore waa in aad u isticmaali Wondershare MobileTrans in gurmad oo dhan xogta ka Nexus 4 ilaa computer ka, ka dibna loo soo celiyo Nexus 5 ka Nexus 4 gurmad file.
Tallaabada 1. Connect Nexus 4 in kombiyuutarka via cable USB ah
Si aad u bilaabaan la, aan bilowno ka Wondeshare MobileTrans software on your computer. Connect Nexus 4 deeruhu in cable USB ah.
Tallaabada 2. xogta kaabta on Nexus 4 ilaa PC Windows
In uu furmo suuqa hoose, guji Back Up Your Phone . Waxaad arki doontaa in aad Nexus 4 Waxaa la aqoonsadaa soo bandhigay dhinaca midig ee suuqa kala software ee. On menu dhexe, waxaad dooran kartaa waxyaabaha aad doonayso in aad gurmad ka dibna riix Start Copy in gurmad aad Nexus 4 si aad u computer.
Tallaabada 3. Soo Celinta Nexus 5 ka Nexus 4 gurmad
Marka habka gurmad u dhammeeyey, aad barkinta karaa Nexus 4 iyo xiriiriyaan Nexus 5 ilaa computer hadda. Markaas dooran Soo Celinta ka hayaan uu furmo suuqa hoose. Markaas waxaad arki doontaa suuqa kala ah sida soo socota. Dooro Nexus 4 gurmad file ka menu jiido-down oo ku hubi. Markaas riix Start Copy inay u soo celiso aad Nexus 5.